4 koofi oo dharka lagu xidho shaati iyo surwaal | Ragga Stylish
Koofiyadu badanaa waxay la xiriiraan isboortiga iyo dharka caadiga ah, laakiin qalabkani sidoo kale wuu shaqeyn karaa xitaa haddii aanaan xiran kabaha isboortiga.
Furaha ayaa ah in lagu sharaddeeyo koofiyadaha shirkadaha isboortiga ee leh nashqadaha miyir-qabka ah... faan la'aan Ku dar tusaalayaasha noocan oo kale ah joornaalkaaga si ay u awoodaan inay qariyaan maalmahaaga timaha xun sidoo kale markaad xiraneyso surwaal dhar iyo shaati ah:
Halkan waxaa ah laba koofi oo dhar madow ah oo aad ka heli karto Mr Porter iyo Zalando, siday u kala horreeyaan. Nooca ugu horeeya, oo laga sameeyay harag iyo cudbi, wuxuu ka yimid Balmain wuxuuna matalaa a qalooca raaxada leh ee loo yaqaan 'baseball cap'. Ku xidho jaakadaha isboortiga ama jaakadaha qarxa dharka. Ta labaad, sida caqliga badan, waxay ka timi Calvin Klein, shirkad kale oo la xiriirta labbiska wanaagsan.
Inta aysan suud ahayn, waxaad ku dari kartaa adigoon wax cabsi ah ka qabin labadan koofiyadood ee 'monochrome caps' muuqaallo xarrago leh. Tusaale ahaan, joorjooyinka dharka lagu lebbisto, funaanad ku habboon oo khafiif ah iyo kabo dhakhtar Martens oo caadi ah.
Koofiyadaha dharka ayaa sidoo kale isku dari kara midabyo, sida soo jeedimahan ka yimid Hilfiger Denim iyo Gucci ay muujinayaan. Kan hore si miyir leh ayuu u sameeyaa; moodel buluug ah oo leh astaanta la aqoonsan karo ee shirkadda lagu xardhay xagga hore. Waxay sifiican ula socon doontaa shaarka polo, jooniska dhibta badan iyo nautical.
Nooca ugu dambeeyay wuxuu ka yimid Gucci. Waxaa ka mid ah waxyaalo ka qurxoon kuwa kale, in kasta oo lagu dhex daray xeelad weyn si loo qaabeeyo dabool kaamil ah oo lagu daro dharka dharka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Koofiyado xidho si aad madaxa ugu daboosho xarrago
Shuruucda aasaasiga ah ee labbiska muuqaal magaalo